Koox Ingariis Ah Oo 200 Milyan Ku Soo Xerogelineysa Lionel Messi Iyo Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Axad Ah |
Koox Ingariis Ah Oo 200 Milyan Ku Soo Xerogelineysa Lionel Messi Iyo Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Axad Ah
Manchester City ayaa bankiga u jabin doonta saxiixa Lionel Messi iyagoo isku diyaarinaya dalab ka badan 200 milyan ginni si ay gacanta ugu soo dhigaan xiddiga Barcelona xagaaga danbe.
Xiddiga Arsenal Santi Cazorla ayaa u ambabaxaya Barcelona laakiin taageerayaasha Gunners uma baahna inay walwalaan madaama uu soo arkayo dhakhtar degan caasimada Catalan isagoo isku dayaya inuu ka soo kabsado dhaawac wareeriyay oo seedaha ah.
Kooxda Manchester City ayaa ku dhow inay la soo wareegto daafaca bidix ee Juventus ee reer Brazil Alex Sandro laakiin waxa ay u baahan yihiin inay si degdeg ah talaabo u qaadaan ka hor inta uusan qiimihiisa labo jibaarmin.
Jose Mourinho ayaa ka fiirsanaya inuu u dhaqaaqo daafaca bidix ee Bayern Munich David Alaba.
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa ka fiirsanaya inuu u dhaqaaqo daafaca bidix ee Bayern Munich David Alaba iyo ninka ay isku wadanka yihiin Julian Baumgartlinger oo u dheela Bayer Leverkusen.
Tottenham ayaa ku soo laabatay ceyrsashada xiddiga da’da yar ee kooxda Malaga ee weerarka ka dheela Sandro Ramirez.
Steven Gerrard iyo Frank Lampard ayaa waxaa doonaya xiriirka kubada cagta kuwaasoo qorsheynayaa inay ka qeyb dhigaan shaqaalaha tababarka England.
Daafaca midig ee Paris Saint-Germain Serge Aurier ayaa waxa uu diirada u saaran yahay kooxaha Manchester City iyo Manchester United.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in Adam Lallana uu wajaho inuu waqti dheer ka sii maqnaado garoomada.
Leicester ayaa ugu danbeyn diyaar u ah inay u ogolaato Jeffrey Schlupp inuu ku biiro West Brom, 12 bilood ka dib markii Leicester ay diiday inay wax ganacsi ah la sameyso West Brom.
Liverpool ayaa diyaarineysa inay 25 milyan ginni ugu dhaqaaqdo bisha Janaayo xiddiga garabka ka dheela ee reer Holland Quincy Promes.
Chris Smalling ayaa ku dhow inuu helo qandaraas cusub oo Manchester United ah inkastoo ay isku dagalaeen tababare Jose Mourinho taam ahaanshihiisa.Napoli ayaa rajeyneysa inay amaah kula wareegto bisha Janaayo daafaca dhaawaca ka soo kabsaday ee Chelsea Kurt Zouma.Everton ayaa kula biirtay Arsenal iyo Liverpool tartanka xiddiga weerarka ka dheela ee Torino Andrea Belotti.